Guriga > Tigidhada tareenka Eurostar ee jaban iyo Qiimaha safarka
Heerka Premier League 96 € – 290 € 190 € – 490 €
Maxay ku kala duwan yihiin Heerarka, Heerka Premier League, iyo Horyaalka Ganacsiga ee Eurostar?
Tareenada Eurostar waxay leeyihiin adeegyo fasal oo dhowr ah oo loogu talagay miisaaniyad kasta, iyo nooc kasta oo safar ah, haddii aad tahay safar ganacsi ama wakhti firaaqo ah ama labadaba 🙂
Fasalka tigidhadan ayaa ka qaalisan nooca tikidhada caadiga ah ee nooca Eurostar, ah Tigidhada Heerka Sare waxay bixiyaan adeegyo dheeri ah. Marka lagu daro faa'iidooyinka tigidhada caadiga ah ee aan kor ku soo qorney, Tikidhada Heerka Sare waxay bixiyaan kursi ka fiican oo leh qol badan, Xulasho balaadhan oo joornaalada iyo joornaalada ah ayaa bilaash ah, oo waxaa lagu siin doonaa cunno fudud iyo cabitaan kursigaaga aad fuushan tahay Eurostar. Tikidhada Heerka Sare ayaa lagu beddeli karaa iyadoo la eegayo khidmad ku xiran halkaad u socoto.
Maya, iyo liddi ku ah, Eurostar waxaa kaliya lagu taageeraa dhibco dhibic ama tigidhada dhibcaha mana taageerayso wax kaararka safarka ah, laakiin haddii aad safar badan u raacdo Eurostar waad ku biiri kartaa naadiga 'Eurostar Club', kani waa barnaamij daacada oo ku siinaya inaad soo aruuriso dhibcaha safarka si aad ugulaabato dhibcohan tigidhada ama sicir-dhimista. Waad kasbataa 1 u fiirso £ 1 kasta oo aad qarash gareysay oo qodobbadaani waxay xaq kuu siinayaan mudnaan gaar ah:
– Ka 200 Dhibco: Waxaad ku heli tigidhada Eurostar qiimo dhimis ah.
– Hadaad hesho 500 Dhibco: waad heli kartaa 1 tayeynta adeegga tareenka.
The Brussels Midi-Koonfureed (Brussels South) saldhigga wuxuu ku yaal bartamaha bartamaha Brussels, laakiin hubi inaad fahanto inaad ubaahantahay Brussels Midi-Koonfureed iyo Saldhigga Dhexe ee Brussels, Xarunta tababarka tareenka ee Midi-Zuid waxay leedahay 22 tareenka meelaha, iyo xafiiska tigidhada Eurostar waxay ku yaalliin barxada 8. Tikidka tareenka ee Eurostar wuxuu kuu oggolaanayaa inaad si xor ah ugu dhex safarto Brussels Midi Zuid iyo Brussels Central.
Bartamaha Amsterdam (Saldhigga dhexe ee Amsterdam) wuxuu ku yaal bartamaha magaalada Amsterdam midigta wabiga, markaad ka baxdo xarunta tareenka, waxaad arkaysaa Amsterdam Main Street oo ay ka buuxaan waxyaabo soo jiidasho leh sida Madame Tussauds oo aan laga soo qaadin halkaas sidoo kale degmada iftiinka cas. Sida saldhigyo tareeno badan oo waaweyn oo ku yaal Yurub, Waxaad haysataa dekado shandado oo goor hore furmaya oo soo daaha haddii aad dooneysid inaad booqato 1 maalin ama ka hor intaadan iska hubin hoteelkaaga.
Xarunta Dhexe ee Antwerp waa meesha aad ka fuulaysid Eurostar ee Antwerp magaalada 2aad ee ugu weyn Belgium, Hadaad ka safarto Antwerp, Waxaan kugula talineynaa inaad runtii timaadid xarunta tareenka muddo ka dheer wixii lagu taliyay 1 saac kahor bixitaanka maxaa yeelay tani waa tan saldhigga tareenka ayaa ku guuleystay abaalmarinno ku saabsan qurxinta iyo qaab dhismeedka waxayna leedahay 5 sagxadaha dhulka iyo sida ugu fiican ee loo dhex maro.
Markii aad tagtid xarunta tareenka iyo aagga loogu talagalay, waxaad iskaan ah tigidhada tikidhada Eurostar, Maalmahan dadku waxay door bidaan inay isticmaalaan lambarka QR, laakiin sidoo kale waad haysan kartaa koobi adag oo tigidhada tareenkaaga ah oo waad iskaankartaa, markaa waa inaad maraysaa baaritaan amniga ah (kuwaas oo aad uga dhaqso badan madaarada), u tag kantaroolka Baasaboorrada oo ka gudub xuduuda ka dibna waxaad u lugeeysaa tareenkaaga iyo habka aad u leedahay dhowr dukaanno ama Fadhi lagu galo Eurostar, Fiidiyowga soo socda waxaad arki kartaa habka oo dhan laga bilaabo markaad timaaddo saldhigga tareenada ilaa aad ka raacdo tareenkaaga Eurostar.
Tan iyo bishii Abriil 2018, mahadsanid Eurostar, waxaad u safri kartaa inta udhaxeysa London iyo Amsterdam 3-4 saacadood, loomana baahna in wax laga beddelo tareennada magaalada Brussels in kasta oo qaar ka mid ah tareennada Eurostar laga soo bilaabo London ilaa Amsterdam, joogso Brussels, laakiin taasi waxay ku xidhan tahay tigidhada Eurostar ee aad iibsato.
Hadaad intaas gaadhay, Waad ogtahay wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato tareenadaada Eurostar oo aad diyaar u tahay inaad ku iibsato tigidhka tareenka Eurostar SaveATrain.com
Ma rabtaa inaad boggaan ku dhigto bartaada? Riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-eurostar%2F%0A%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah), Ama si toos ah ayaad ugu xidhiidhi kartaa boggan.